सियोनाको लागी २५ करोड नै किन ? उनका का बाबाले खुलासा गरे आज यस्तो राज (भिडियो हेर्नुहोस) – AB Sansar
October 29, 2020 adminLeaveaComment on सियोनाको लागी २५ करोड नै किन ? उनका का बाबाले खुलासा गरे आज यस्तो राज (भिडियो हेर्नुहोस)
काठमाडौ । बरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञा डा. सन्दीप श्रेष्ठ र नर्स एलिना गुरुङको १० महिने छोरी सियोना श्रेष्ठ स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी रोगसँग ल’डि’रहेकी छन् । सियोनाको उपचारको लागि ठूलो रकम लाग्ने उनकी आमा एलिना गुरुङले बताएकी छन् । **** यो समाचार को पूरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ****
उनले आफ्नो छोरीलाई बचाउन सहयोग गर्नका लागि सबैलाई अपिल गरेकी छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा आएका नकारात्मक टिप्पणीका कारण आफुहरु निकै दुखी भएको बताएका छन् । छोरीकै लागि श्रीमानले डाक्टरी पेशाको काम समेत छोडेको र आफुले पनि जागिर छोडेर छोरीको उपचारमा लागेको बताएकी छन् । उनले एउटा मात्र नराम्रो टिप्पणीले सहयोग गर्न चाहनेहरुलाई नराम्रो असर गर्ने भएकाले त्यस्तो नकारात्मक टिप्पणी नगर्न आग्रह गरेकी छन् । तुफान मीडिया बाट **** यो समाचार को पूरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ****
हाम्रा लागि गिद्धहरू बाँच्न किन जरूरी छ?